नेपाल आज | हिमानीदेखि साम्राज्ञीले यसकारण छेडेका रहेछन् नाइटो
हिमानीदेखि साम्राज्ञीले यसकारण छेडेका रहेछन् नाइटो
पूव युवराज्ञी हिमानी शाहको मुस्कान, मुहार र जिउडाल आकर्षक मानिन्छ । शालिन स्वभावकी उनी समाजसेवामा जुटेसंगै नयां तथ्य बाहिरियो । उनी बाहिर जति सरल झन् भित्र उतै नै गल्यामरसपनि । कुरा हो दोलखाको । हिमानी ट्रष्ट मार्फत आयोजित कार्यक्रमका लागि नाम्बु पुगेकी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी साडी र ब्लाउजमा सजिएकी थिइन् । हावा खुब चलिरहेको थियो । उभिएकी हिमानीको साडीको फुर्कोलाई हावाले हल्लाइदियो । च्यापिएको फुर्कोले ठाऊं छोड्यो र हिमानीको नाइटो देखियो । त्यतिनै बेला पत्रकारको क्यामरामा मुन्द्री लगाएको हिमानीको नाइटोसहितको तस्बिर कैद भयो ।
चिटिक्क मिलाएर लगाइएको सारीको फुर्कोले हिमानीको भिन्दै संसार छोपेको रहेछ । नाइटोमा मुन्द्रा लगाएको सो फोटो चर्चित भयो । धेरैले हिमानी त्यतिसम्म गल्यामरस होलिन भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिएनन् । ५ बर्ष अघिको यही फोटोलाई गत बर्ष पारसकी थाइप्रेमी कन्निकाले पोष्ट गरेकी थिइन् । मुन्द्रा लगाइएको नाइटोको टुक्रालाई फोटोसप मार्फत हाइलाइट गरेर कन्निकाले हिमानीको फोटो राखेपछि नेपालीले उनको आलोचना गरेका थिए । कन्निकाको नियत नकारात्मक भएको र हिमानीको अपमान गर्न खोजेको भन्दै कन्निकामाथि नेपाली खनिएका थिए । त्यसलगत्तै उनले सो फोटो हटाएकी थिइन् । नाम्बुपछि अन्यत्र हिमानीको नाइटो र मुन्द्री देखिएको छैन ।
ड्रिम्स चलचित्रमा अनमोल केसीसंग रोमान्स गरेपछि चर्चामा आएकी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको नाइटोमा झुण्डिएको मुन्द्री अहिले चर्चामा छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कलाकारलाई दिवा भोज दिएका थिए । सेतो जालीवाला टिर्सट र निलो जिन्समा सजिएकी उनी बालुवाटार बाहिर पोज दिंदै थिइन् । फोटोमा पोज दिंदैगर्दा जालिदार टिर्सट थोरै माथि स¥यो, नाइटोको मुन्द्री देखियो । देखिएर के भो त ? आखिर देखाउनलाई नै लगाइएको हो ।
के हो नाइटोको मुन्द्री
नाइटोमा लगाइएको मुन्द्रीलाई अंग्रेजीमा बेल बटन रिङ्ग भनिन्छ । यसरी नाइटोमा रिङ्ग लगाउनु अर्थात नेभल पाइरेसिङ दक्षिण पूर्वी एशियाकै आदिम सभ्यतामा पर्दछ । कामसूत्रमा भनिए अनुसार यो १४ सय बर्षअघिकै अभ्यास हो । पश्चिमा समाजमा यो पछिल्लो समय चलनचल्तिमा छ । सन् १९९३ मा लण्डनमा आयोजित फेशन सोमा क्रिष्टि टर्लिनटङले लगाएको मुन्द्रीले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । नाइटोमा लगाउने मुन्द्री धेरै प्रकारका हुने गर्दछन् । हुंदाहुंदा अहिले योनीको टुप्पामा समेत मुन्द्री झुण्डाउने चलन आएको छ । नीला चलचित्रमा पोर्नस्टारहरुले योनीमा मुन्द्री लगाएको देखिन्छ । अरुले के गर्छन ? त्यो गोप्य नै हुने भयो ।
किन लगाइन्छ नाइटोमा मुन्द्री ?
औंठी लगाउनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । विवाहित हो भनेर जनाउनदेखि ग्रहदशा कटाउनसम्म औंठीको प्रयोग हुने गर्दछ । त्यस्तै नाइटोको मुन्द्रीका पछाडिपनि कुनै कारण छ की ? यसको कुनै विशिष्ट अर्थ नरहेको बताइन्छ । पुरुषले आफुलाई बहादुर देखाउन र महिलाले सौन्दर्यका लागि नाइटोमा मुन्द्री लगाउने गरेको सामान्य बुझाइ छ । व्युटिसियन कमला श्रेष्ठले सौन्दर्यशास्त्रीय हिसावले नाइटोमा मुन्द्री लगाउनुको खाश कारण नरहेको बताइन् । व्यक्तिको रुचीमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘नाइटोमा मुन्द्री लगाउंदा आफु राम्री र आर्कषक देखिन्छु भन्ठानेर लगाइने हो, खाशमा कुनै कारण छैन ।’ श्रेष्ठले जवाफ फर्काइन्, ‘कस्ले कस्तो मुन्द्री लगाउने, कहिले लगाउने भन्ने केही छैन ।’
himani himani shah Kamala Shrestha Model